Izinhlobo zamatamatisi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izinhlobo zamatamatisi
Izinhlobo zamatamatayi ezitshalo zokugcina izithombo
Noma yimuphi umlimi wezilwane ufuna ukwenza into ayithandayo - ingadi - hhayi kuphela ehlobo kodwa nasebusika. Ukuze wenze lokhu, abantu beza nezindawo zokugcina izithombo - izindawo ezivikelekile zenhlabathi, lapho ungakhula khona izitshalo ezahlukene kunoma yisiphi isimo sezulu nesimo sokushisa. Uma usuvele wakha ukushisa okubamba ukushisa futhi ufuna izinhlobonhlobo zezamatamatisi ezizokhula ngempela kusayithi lakho, khona-ke impendulo ikule ngxenye.
Izinhlobonhlobo ezinhle zika utamatisi: izincazelo, izinzuzo, ukungalungi
Abalimi bokuqala cishe banesithakazelo embuzweni wokuthi yini okufanele itshalwe ukuze uthole isivuno esihle kakhulu. Lesi sihloko silabo abafuna ukuphumelela ekutheni utamatisi akhule. Phela, kunezinhlobonhlobo zezitamatisi, futhi zihlukile ngokunambitha, umbala, usayizi nezinye izici. Ngakho-ke, uma uzibekela umgomo ukuze uthole utamatisi othakazelisayo, khona-ke lolu lwazi lungowakho.
Utamatisi Budenovka: izimfihlo zokukhula
Utamatisi (noma utamatisi) angahlobisa noma yiliphi itafula, engeza izitsha zokudla nezitsha (amajikijolo amakhulu abomvu ayasetshenziselwa ukulungisa ama-saladi kuphela, kodwa futhi asebenzise ama-appetizers noma ama-casseroles ahlukahlukene). Ukuze ukhethe umkhiqizo wekhwalithi ohambisana ngokugcwele nezidingo zakho, udinga okungenani ukuma kancane ezinhlobonhlobo zezitshalo.
Indlela yokunakekela utamatisi Liang
Kunzima ukukhetha uhlobo oluthile lwezotamatisi phakathi kwezinhlobo eziningi nezinhlobo zazo zonke izinhlobo. Abalimi abaningi nabalimi bakhetha ukutshala ezindaweni zabo ezijwayele futhi ezihlolwe isikhathi. Futhi enye ethandwa kakhulu yi-tomato kaLiana. Ukuzikhethela kwe-Lyana ezihlukahlukene Kuyinto yokuvuthwa kokuqala futhi ngesikhathi esifanayo ezihlukahlukene ezivumela.
Inhliziyo kaTomato Bull: ukukhula nokunakekelwa
Abalimi abaningi abatshala utamatisi, banesithakazelo sendlela yokutshala utamatisi "Bull Heart" ensimini. Sizokucabangela kanye nawe izici zokukhula ezihlukahlukene ezithakazelisayo. Uyazi? Phakathi nekhulu le-XVI, utamatisi weza eYurophu. Kwaphela isikhathi eside, utamatisi ayebhekwa njengengatholakali futhi enobuthi.
Hlanganisa ama-Tomato Pink Honey
Abalimi abaningi bezobuchwepheshe, ngisho nabalimi be-amateur, bazama njalo ukuthola isivuno esingcono, esibaphoqa ukuba bahlole ezinye izinhlobo zemifino, izithelo namajikijolo. Namuhla, sikwazi ukuletha izitshalo eziningi ezibalulekile, kuhlanganise ne-Pink Honey utamatisi.
Indlela yokukhulisa utamatisi "De Barao" engadini yakho
Namuhla utamatisi ngumkhiqizo ovamile kuwo wonke amathebula. Izakhamuzi zasehlobo nezalimi zibheka njengomthetho wokutshala le mifino emibhedeni yabo. Ezweni kunezinhlobo eziningi zezamatamatisi, futhi ngayinye yazo iyingqayizivele futhi iyinambitha ngendlela yayo. Kodwa phakathi kwazo zonke lezi zinhlobo utamatisi "De Barao" kufanelekela ukunakwa okukhethekile.
Indlela yokukhulisa "iNduna Enkulu", ukutshala nokunakekela "utamatisi omnyama"
I "Prince Black" ibizwa ngokuyinhloko ngombala omnyama we-burgundy wezithelo zawo. Okunye okunye okujwayelekile okukhiqiza utamatisi okuvame ukukhiqizwa okukhulu. "I-Black Prince" yaxoshwa ngabalimi baseChina. Ubunikazi bezakhi zofuzo basetshenziselwa ukutshala, kodwa ezihlukahlukene azibhekwa njenge-GMO, ngakho abathandi bokudla okunempilo bangasebenzisa lezi zinhlobonhlobo zezamatamatisi ngaphandle kokwesaba.
Kuzo zonke izinhlobo zezotamatisi emakethe namuhla, abalimi bazama ukukhetha labo abangenakuzithoba lapho bekhulile ensimini, abadingi i-garter ne-pasynkovaniya. Zonke lezi zinzuzo zinama-Oak of Tomato. Utamatisi Dubrava: incazelo ehlukahlukene Lolu hlobo lwezotamatisi lunokuphakama okulinganiselwe kwe-stem - alukhuli ngaphezu kuka-70 cm ukuphakama.
Izici zokukhula utamatisi utamatisi, ukutshala nokunakekelwa utamatisi utamatisi
Utamatisi uyimifino ethandwayo phakathi kwezitshalo zasadini. Ububanzi bayo bukhulu kakhulu: okusha, ngezifundo zokuqala neziqala, ukugaya. Izinkinga zokulima, ezifana nezimo zezulu, zikhuthaza abakhiqizi ukuba bathuthukise ezintsha, eziphikisana nezimo zezulu ezihlukene, kanye nezinhlobo zezifo.
Izici zokukhula kwe-Honey ensimini, ukutshala nokunakekela utamatisi ophuzi
Izinhlobonhlobo zezinhlamvu nezitshalo zezitshalo zemifino zenze ubunzima abathile kulabo abathanda ukumba engadini yabo. Kwaba nzima ukukhetha, ukuphonsa kwalasha lwama-market proposals. Mhlawumbe ukubukeka okungavamile kuyoba yinsiza ehamba ngaphezu kwezilinganiso ne Honey Honey uthambisa phansi.
Indlela yokutshala utamatisi "Pertsevidny", ikakhulukazi ukutshala nokunakekela isitshalo
Utamatisi - enye yezitshalo ezithandwa kakhulu. Zitholakala cishe yonke ingadi. Ngesikhathi sekukhona le mifino, izinhlobo eziningi ziye zahlushwa ezinemikhakha ehlukene futhi zifanelekile izimo ezihlukene ngokuphelele. Utamatisi "Pepper": incazelo nezinhlobonhlobo Utamatisi "Pepper" ubhekisela kulezo zinhlobo ezichazwayo nezinye izitshalo.
Ukuthuthwa kweTamatato: incazelo ehlukahlukene, isivuno, ukutshala nokunakekelwa
Utamatisi njalo isisombululo esihle sabalimi. Kuyinto elula ukuyikhulela esakhiweni sakho, futhi kukhona inzuzo enkulu kubo. Ngaphandle kokunomsoco, utamatisi ucebile amavithamini nezakhi, futhi zingahlobisa noma yikuphi isidlo. Ukuze sijabulele le mifino emangalisayo, abalimi baye baletha izinhlobo eziningi zakuqala, futhi phakathi kwabo kukhona izinhlobo ezihlukahlukene zokulondoloza utamatisi, okutholakala kakhulu emibhedeni.
Utamatisi Marina Grove: ukutshala, ukunakekelwa, izinzuzo kanye nokungalungi
Abalimi bezolimo nabalimi bafuna kakhulu isivuno sabo futhi ngokuvamile abajabuli nabo. Ngisho nabachwepheshe abanolwazi abahlale bengakwazi ukuhlanganisa ukunambitheka okuhle kwezithelo ngesitshalo esikhulu. Lokhu kusebenza ngokugcwele kumatamatisi. Utamatisi abaningi banambitheka kakhulu uma kusetshenziselwa okusha, kepha akufanele neze ukulondolozwa, futhi ngokufanayo.
Utamatisi "Kate": incazelo, isivuno, izici zokutshala nokunakekelwa
Izinhlobo zamatamatisi "Kate" zazibonakalisa ngokuphelele phakathi kwezinhlobonhlobo zakuqala zotamatisi. Njengoba izici zayo ezinhle, njengokuphikisana nezifo kanye nezimo zezulu ezimbi, izinhlobo ezihlukahlukene ze-tomato "uKatya" ziye zathola izigidi zezakhamuzi zasehlobo. Ngisho nabalimi be-novice bangatshala utamatisi onjalo, ngoba akudingi ukunakekelwa okuqondile.
Indlela yokukhulisa "i-raspberry giant", ukutshala nokunakekela utamatisi ensimini
Ezihlukahlukene utamatisi "Raspberry Giant" idume ukunambitheka kanye nosayizi. Uyanqoba abalimi ngombala wakhe othakazelisayo, ukunambitha nokukhiqiza. Kulesi sihloko sizochaza indlela yokutshala utamatisi "Okusajingijolo Giant", incazelo ezihlukahlukene kanye nezici ukunakekelwa. "Okusajingijolo Okukhulu": incazelo kanye nezici zezinhlobonhlobo Utamatisi "Okusajingijolo Giant" kuyinhlobonhlobo ecacile, okutshalwe kuyo akudingi ukulawula ukukhula, ngakho-ke, ngeke kudingekile ukuchofoza amaphuzu okukhula.
Mikado Pink: Indlela Yokukhula Imperial Utamatisi
Ukunambitheka, ukubukeka nokukhiqiza okuphakathi kwe-tomato izinhlobo "Mikado Pink" wathola ukuhlolwa okunethezeka kwabathengi. Sekuyiminyaka engu-2 ekhona, lolu hlobo lwenkazimulo ehlonishwayo yamadizayini aseYurophu futhi lathola igama elingabonakali elithi "umbusi". Masihlale phezu kwezici zamatamatisi "Mikado pink" kulezi zici nokukhathalela.
Utamatisi "Bobcat": incazelo ezihlukahlukene kanye nemithetho yokutshala nokunakekelwa
Noma yimuphi umlimi angathanda ukuba utamatisi esiqhingini esingajabula ngokunambitheka nokukhiqiza. Enye yalezi zinhlobonhlobo inikezelwe ekubuyekezeni kwethu kwanamuhla. Utamatisi "Bobcat": incazelo kanye nezici Ake sibone ukuthi lezi zihlukahlukene ziyamangalisa nokuthi yini okufanele uyiqaphele uma ikhulile. Incazelo yesihlahla Isihlahla sibhekisela ebukhulu besilinganiso sezinhlobonhlobo.
Izimpawu kanye nezici zezamatamatisi ezikhulayo "Abaqaphi Abomvu"
Namuhla kunenani elikhulu lezinhlobonhlobo zezotamatisi. Okuthandwa kakhulu yizinhlobonhlobo "U-Red Guard", okuzoxoxwa ngakho kulesi sihloko. Utamatisi "Abaqaphi Abomvu": umlando wokuzalanisa i-hybrid Ezindawo eziningi ezisenyakatho, lapho isikhathi sasehlobo sincane khona, kuze kube yilapho kwakunezinkinga zokutshala utamatisi.
Okuphawulekayo kokutamatisi okukhulayo "I-Sugar Bison" ezindaweni zokugcina izithombo
Utamatisi "I-Sugar Bison" ihluke ngokuphawulekayo kwezinye izinhlobo "zezihlobo" zayo, futhi yathola izibuyekezo ezinhle kakhulu ezivela kubalimi abaningi. Futhi namuhla uzofunda incazelo nokusetshenziswa kwezinhlobonhlobo, kanye ne-agrotechnology yemifino ekhulayo ezindaweni zokugcina izithombo. Umlando wokukhipha utamatisi "I-Sugar bison" Izinhlobonhlobo zamatamatisi "I-Sugar Bison" zakhiwe abalimi basekhaya eRussia ngokuzalela.